Abasebenzisi be-iPhone abali-9 kuphela abaya kuthenga i-iPhone 7 | IPhone iindaba
Iindaba ezothusayo ngokutsho kwabahlalutyi, emva kovavanyo olukhulu olwenziwe e-United States of America, abasebenzisi abane-iPhone 6 okanye i-iPhone 6s ababonakali ngathi banomdla wokufumana i-iPhone 7. Kubonakala ngathi umkhuhlane we-iPhone entsha sele uqalile ukuma, Mhlawumbi, uninzi lwentengiso lwenziwe ngenxa yokwanda kobungakanani bescreen, kwaye ayisiyiyo ngenxa yoyilo, kuba uninzi lwethu luyavuma ukuba i-iPhone 6 lolona luyilo luphumeleleyo kwimbali ye-iPhone. Ukongeza, bambalwa abanawo onke amathemba abo abekwe kwisikhumbuzo se-10th se-iPhone kunye nokusungulwa kwayo okukhulu.
Ngapha koko, lo msitho we-6th we-iPhone sesona sizathu siphambili sokuba uninzi lwabasebenzisi bagqibe kwelokuba basitsibe isizukulwana esilandelayo se-iPhone. Ngokwam, ndingumnini wangoku we-iPhone 7 Spacial Grey, kwaye andinayo nengcinga encinci yokufumana iinkonzo ze-iPhone 6, ubuncinci ukuba uyilo luqhubeka njalo, kuba inika umbono wokuba ngokubhekisele kwizixhobo, Siza kubona okuncinci okwenyani, okunomda ekugcineni izinto ezinqabileyo ze-iPhone XNUMXs. Ingxelo yophando ibonisa ukuba yi-9% kuphela yabasebenzisi bayo nayiphi na imodeli ye-iPhone 6 okanye ye-6s abacinga ukuthenga i-iPhone 7 yexesha elizayo.
Sukuyenza impazamo, ngoku kukho iminyaka emithathu ilandelelana esathi sayazi uyilo lokugqibela lwe-iPhone ngenyanga kaJulayi, ke asinathemba lokuba oku kuya kutshintsha kakhulu. Oku kuthelekiswa ne-25% yabasebenzisi abaphendulileyo ukuba baya kukulungela ukuthenga i-iPhone 7 entsha ukuba ithe yafumana utshintsho olukhulu kuyilo. Yiyo loo nto, kufuneka silinde i-Keynote ezakwenzeka phakathi ku-Septemba ukuqinisekisa into esiyiphantseyo sonke, i-iPhone 7 ayisayi kuba yinto egqibeleleyo ye-iPhone 6S.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Kuphela yi-9% yabasebenzisi be-iPhone abaya kuthenga i-iPhone 7
Ndine-6S kwaye andiyicingi nokuyicinga ngaphandle kokuba uyilo lutshintshe kakhulu kodwa ndabona endikubonileyo, ngokufanayo
Sele i-iPhone 6S ininzi ithengiwe ngaphandle kwe-inertia. Yayintle ngokufana ne-iPhone 6 (kwaye kwimbono yam nayo ngezo layini zintle kakhulu ngasemva).
Ndine-iPhone 5 kwaye andikucingi nokuyitshintshela i-7 okanye i-8, inyani kukuba isebenza kakuhle kuba sisixhobo se-Apple, kutheni ke uyitshintsha? 😛
IBenji vega sitsho
Ewe, ndinomdla wokwazi ukuba yeyiphi i-iPhone 7 eza kungenisa ngaphakathi kuba ezinye ziya kuthwala ... (Ndithi) Ndinee-6s kunye kunye kwaye xa kuthelekiswa ne-6 kukho umahluko omkhulu, ukuqaqambisa i-3D Touch, ke ukuba u7 uzisa into kwakhona kuyakufuneka sizame
Phendula uBhenji Vega
Kwaye ikunike into engekhoyo yoyilo! Ewe ndoda, imbi kakhulu uyilo lwe-iPhone 6 / 6s enomdla ukuba bonke abavelisi abahambahambayo bayikopa. Akunakwenzeka ukuba ungaboni kwivenkile ukulandelwa koyilo lwe-iPhone njengesiTshayina esincinci esinefowuni apho kubandakanya nezo zeempawu ezifana ne-htc, motorola, lg, samsung, njl. kunye njl
Njengoko i-iPhone 7 imnyama njengaleyo ikwisithombe, sele ndiyithengile. Ndine-iphone 6s kwindawo efihlakeleyo engwevu.
Ngendlela, iikopi zexabiso eliphantsi kunye neefrokhthi zoyilo lwe-iphone 6s ozibonayo kwezinye iimoto ezihamba nomzimba zinjalo, ziikopi ezingabizi kakhulu nezimnandi. Akukho nto injengoyilo lwe-iphone 6s
Ewe, kuba khange siqale ukuthetha nge-iPhone 8, sele siyazi ukuba injani i-7, ngakumbi ngokufanayo, ndiyayima manene. Ndigcina i-iPhone 6s yam kunye ne-64, endiyishiyileyo, kodwa ixesha elide, ubuncinci iminyaka emibini, ndicinga ukuba ukubetha okukhulu okuvela kuApple kuyeza, ukuba ayilixesha nexesha.
Impendulo ye-taptic ye-iPhone yekamva inokungcangcazela kumacala aliqela